July 2018 - Riddle Nepal
santosh Jul 29, 2018 0
१३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानून बनाउन माग गरेको छ । आइतबार संसदको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस नेतृ उमा रेग्मीले भारत र अमेरिकामा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा…
पाइलटले रक्सी खाएपछि विमानस्थलले रोक्यो फ्लाई दुबईको फ्लाइट
पाइलटले रक्सी खाएको थाहा पाएपछि आइतबार बिहान दुबईका लागि उड्न तयार फ्लाई दुबईको जहाज काठमाडौंमा रोकिएको छ। जहाजका पाइलटले रक्सी खाएको थाहा पाएपछि चालक दलका अन्य सदस्यले विमानस्थल प्रशासनलाई त्यसको जानकारी दिएको स्रोतले बतायो। ‘एक जना…
कलंकीको एक होटलमा सशस्त्रका दुई प्रहरीले गरे युवती बलात्कार, आरोपमा दुईदुबैजना पक्राउ
काठमाडौं – बलात्कार आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा कार्यालयका दुई प्रहरी पक्राउ परेका छन्। कलंकीको आशीर्वाद गेस्ट हाउसमा एक युवतीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ…
अब दैनिक साढे ३ घण्टा मात्र टिपर सञ्चालन गर्न पाईने, बिदाका दिन बाहेक बिहान डेढ घण्टा र दिउँसो २…
बिराटचौक । मोरङको सुन्दरहरैचास्थित बिराटचौक हुँदै बिराटनगर जाने घिनाघाट सडकमा बिदाका दिन बाहेक बिहान डेढ घण्टा र दिउँसो २ घण्टामात्र टिपर सञ्चालन गर्न पाईने भएको छ । टिपरको आतंक बढेपछि स्थानीयले शनिबार टिपर सञ्चालनमा रोक लगाउन माग गर्दै…
पूरै विमानका एक्ला यात्रीः पाइलटले ककपिटमा राखेर खिचे सेल्फी, उपहारसमेत दिइयो
विमानभित्र एक्लो यात्री हुनु एक व्यक्तिका लागि मज्जाको अनुभव साबित भयो । साथीको विवाहमा समावेश हुन गएका साद जिलानी ग्रिसको कोर्फूबाट इंगल्याण्डको बर्मिंघर फर्कने तयारीमा थिए । उनले ४० युरो (पाँच हजार रुपैयाँ) मा विमानको टिकट बुक…
यस्तो रहेछ सरकार र डा. केसीबीच भएको अन्तिम नौबुँदे सहमति
santosh Jul 27, 2018 0
काठमाडौं - सरकार र अनशनरत डा गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा नौबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि डा. केसीले बिहीबार राती अनसन तोड्नुभएको छ । सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन सुरु भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर…
प्रसाईंलाई सजाय किन भएन ?कसैको गालीबेइज्जती गरे के हुन्छ ? कानुन भन्छ, ‘मुद्दा चल्छ र सजाय हुन्छ
santosh Jul 25, 2018 0
काठमाडौँ — कसैको गालीबेइज्जती गरे के हुन्छ ? कानुन भन्छ, ‘मुद्दा चल्छ र सजाय हुन्छ ।’ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसो गरे उसको पद नै जान्छ । जस्तो कि भर्खरै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ राजीनामा दिन बाध्य भए । उनले एउटा समूहका…
फिफाको उत्कृष्ट खेलाडी को होला ? रोनाल्डो र मेस्सीसँगै केन र सलाह पनि तर नेइमार सूचीमै अटाएनन्
फिफा उत्कृष्ट वर्ष पुरुष खेलाडीको प्रतिस्पर्धामा ह्यारी केन र मोहम्मद सलाह रहेका छन् । फिफाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको १० जना खेलाडीको मनोनयनको सूचीमा इंग्ल्याण्डका कप्तान तथा लिभरपुलका स्टार खेलाडी परेका हुन् । त्यस्तै विश्वकप विजेता…
काठमाडौं । गायिका अञ्जु पन्तको स्वरमा जति भावुकताको मिठास अरुका स्वरमा विरलै भेटिएला । एउटा गजलमा भरेको स्वरले दिएको उचाईसँगै अञ्जुको गायन यात्राले पनि गति लियो । गायन नेपालमा एउटा राम्रो पेशा पनि बनिसकेको छ । यो सौखमात्र होइन,…
दबाबमा परेपछि कानुनमन्त्री तामाङ राजिनामा दिने तयारीमा
santosh Jul 24, 2018 0
काठमाडौँ — आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण अालोचित बनेका कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पदबाट मंगलबार दिउँसो राजीनामा दिने तयारीमा छन् । पार्टी भित्रैबाट उनलाई राजीनामा दिन दवाव परेपछि उनी राजिनामा दिन तयार भएका हुन् । केही दिन…